Etu esi ewepu ihe nkocha nke PVC ala? - News-Topflor China limited
Echiche:80 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Plasticlọ plastik PVC dị mma ma mara mma, mana gluu fọdụrụ n'ala mgbe emechara ya bụ isi ọwụwa maka ndị na-azụ ahịa. Ọtụtụ ndị na-eri ihe anaghị ewepụ foduru nke fụrụ n’uko plastik nke ọma mgbe ha na-arụ ala rọba ahụ, ma na-agagharị n’elu ala, na-ebute nzọ ụkwụ niile n’ala. Olee otú n'ụzọ ziri ezi wepụ ihe mmapụta gluu?
1. Hichaa akwa nhicha mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa na mmanya na-aba n'anya (ọkacha mma ya na mmanya ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mmanya ọgwụ), wee hichaa ọtụtụ oge iji hichaa.
2. Jiri acetone. Usoro a bu otu ihe a. Zọ kachasị mma bụ na ọ nwere ike wepu ụdọ fọdụrụ na ngwa ngwa na ngwa ngwa, nke dị mma karịa sprayer.
3. Na-asacha na ntu. Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka mmanya acetone. Nsonaazụ ahụ dị mma. Ọkpụkpụ ntu adịghị mkpa ịdị mma ma ọ bụ nkezi, ọ bụrụhaala na enwere ike iwepụ mbọ.
4. Jiri ude aka. Izizi, dọpụ elu ihe ahụ e biri ebi, wee pịgharịa ụfọdụ ude aka na ya, wee jiri nwayọ were jiri nwayọ na-ete ya. Mgbe obere oge gachara, ihe ndị fọdụrụ ga-arapara. Jiri nwayọọ. Hand cream bụ ihe mmanu mmanu nke ihe ya na-adabaghị na chịngọm. A na-eji atụmatụ a wepụ gluu.
5. Jiri mmiri banana. Nke a bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe eji ewepu agba ma dị mfe. Usoro a yikwara mmanya acetone.
Ihe inyeaka eji usoro ndị a bụ ihe a na-ahụkarị na ndụ kwa ụbọchị, yana usoro ọrụ ahụ dịtụ mfe. Ọ dị mkpa iwepu plọg pọd na PVC plastic.